Thenga i-Hormone Yabesifazane i-Estrogen Ithuthukisa i-Mexican Wild Yam Extract - Ukuhanjiswa Kwamahhala Futhi Akukho Intela | WoopShop®
I-Hormone Yabesifazane i-Estrogen Ithuthukisa i-Mexican Wild Yam Extract
$ 55.99 Intengo ejwayelekile $ 69.99
Color Amabhodlela e-2 Ibhodlela le-1 Amabhodlela e-5
Amabhodlela e-2 Ibhodlela le-1 Amabhodlela e-5
I-Hormone Yabesifazane i-Estrogen Ithuthukisa i-Mexican Wild Yam Extract - amabhodlela ama-2 ihlehlisiwe futhi izothunyelwa ngokushesha nje lapho isibuyile esitokweni.
Inombolo yesibonelo: 73291
Ubuningi: Ibhodlela elilodwa - amabhodlela ama-1
Umdabu waseNyakatho Melika, ngesikhathi sama-1940, iWild Yam yatholwa ngabaphenyi nososayensi. I-Mexican Wild yam yinto esetshenziselwe ngokomlando impilo yabesifazane. Muva nje, izinzuzo eziningi zezempilo ze-Mexican Wild yam zilethwe ekwaziseni umhlaba osathuthuka. I-Mexican Wild Yam iyisitshalo semifino esinezimpande nezilimo eziyizigaxa eziqukethe i-hormone yabesifazane eyenziwe ngesitshalo ebizwa nge-diosgenin, okuyisandulela seProgesterone ne-DHEA.
I-Mexican Wild Yam iqukethe i-diosgenin okukholelwa ukuthi iqeda izimpawu ezinzima zokuya esikhathini njengokushintshashintsha kwemizwelo, ukoma kwesitho sangasese sowesifazane, ukucasuka, ukushisa okushisayo, amajaqamba nokuqwasha.
I-Mexican Wild Yam Extract 5000mg yenziwa nge-potent ephezulu enamandla (i-Dioscorea barbasco) Extract (10: 1 ekhishwe ukugxila) i-10x enamandla njengemikhiqizo efanayo emakethe.
I-Mexican Wild Yam sekuyisikhathi eside yaziswa ngabesifazane base-Asia ngezinzuzo zayo ezaziwayo kwezempilo, ikakhulukazi ngeminyaka yokunqamuka kokuya esikhathini.
Izithako: I-Proprietary Blend 10: 1 Khipha i-5000MG: I-Mexican Wild Yam, i-Pueraria Mirifica, i-Motherwort. Ezinye Izithako: Ama-capsules we-Vegetarian. Khipha i-100%, azikho izinto zokugcwalisa, azikho izibopho, azikho izithako zokufakelwa.
Ukusetshenziswa Okuphakanyisiwe: Njengesengezo sokudla, thatha amaphilisi ayi-1 kuya kwayi-3 nsuku zonke, noma njengoba uqondiswe ngudokotela wakho. Ungadluli ekudleni kwansuku zonke okuphakanyisiwe.
Isiza abesifazane ukuthi balondoloze ukunqamuka kokuya esikhathini okuzolile nokunethezeka
Iqukethe ama-sterols ezitshalo kusuka kumamaki aphezulu kakhulu aseMexico
Kuqukethe amavithamini, amaminerali, i-fiber, i-carbohydrate, namaprotheni
Ukuthuthukiswa kwehomoni yabesifazane kwabesifazane nabesilisa nabesilisa
I-Phyto-Estrogens Ikhuthaza Ukuthuthukiswa Kwethishu Yamabele
Akucebisi uma ukhulelwe noma uncelisa
Qaphela & Izexwayiso:
Ukuqinisekiswa Kwekhwalithi: Lo mkhiqizo wenziwe eChina kwikhodi yokusebenza ye-GMP.
Ukuvikela ubumfihlo bakho zonke izinto zithunyelwa kumaphakeji angenalutho ngaphandle kokukhonjiswa kokuqukethwe.
Imininingwane Elulekayo: Izithasiselo zokudla akumele zisetshenziswe esikhundleni sokudla okuhlukahlukene futhi okunempilo kanye nendlela yokuphila enempilo. Uma ukhulelwe, unesi, noma umuthi kadokotela, sicela uxhumane nodokotela ngaphambi kokuwusebenzisa. Yeka ukusebenzisa futhi ubonane nodokotela uma kwenzeka ukusabela okungekuhle. Gcina lapho izingane zingafinyeleli khona. Gcina endaweni epholile, eyomile. Ungayisebenzisi uma uphawu ngaphansi kwesihluthulelo luphukile noma lungekho.
Lo mkhiqizo awuhloselwe ukuxilonga, ukwelapha, ukwelapha noma ukuvimbela noma yikuphi ukugula noma isifo. Sicela uxhumane nodokotela wakho ukuthola ukuxilongwa noma ukwelashwa.
Kubukeka sengathi kuhamba kahle kakhulu, ngiyabonga
Angikwazi ukusho kahle ukuthi wenzani.
tnx kakhulu! ivukile ivaliwe futhi ishesha kakhulu ..